ဖိုတိုရှောပ့်နဲ့ ခရီးစဉ်အတုတွေဖန်တီးပြီး အင်စတာဂရမ်မှာ prank လုပ်ရင်း အောင်မြင်သွားသူအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်…. - Zeekwat Hot News
June 10, 20190752
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အင်စတာဂရမ် နောက်ပြောင်ကျီစယ်မှုတွေက ထရန်းတစ်ခုအနေနဲ့ ပေါ်ပြူလာဖြစ်လာနေပါတယ်။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ် George Mason ဆိုတဲ့ YouTuber ဟာဆိုလည်း ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာ ထရန်းပေါ်လိုက်ပြီး prank တစ်ခုကို ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။
Harry Potter? Is that you??? And no before you ask I don’t need glasses 😂😂 I just wear them because they me me feel smart🤓😂 I’ve also never seen Harry Potter 🤦🏼‍♂️😂
A post shared by GeorgeMasonTV (@george.masontv) on Jun 20, 2018 at 10:03am PDT
လန်ဒန်အခြေစိုက် ဘလောဂ့်ဂါဟာ သူရဲ့ ဖိုတိုရှော့ပ် စကေးတွေကို ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး သူ့ အင်စတာဂရမ် အကောင့်ထဲက follower တွေကို ဥရောပနိုင်ငံ ၅ နိုင်ငံဆီ ၈ ရက်တာ အလည်အပတ် ခရီးထွက်နေတယ်လို့ ထင်မြင်စေခဲ့ပါတယ်။
သူရဲ့နောက်ပြောင်မှုကို YouTube ဗီဒီယိုနဲ့ ပြန်လည် ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ ဗီဒီယိုက ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်န၀ါရီလက တင်ခဲ့ပြီး အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ အခုထိ ကြည့်ရှုသူ ၇ သန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ ဆိုရှယ်မီဒီယာဟာ လူပေါင်းများစွာနဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ခွင့်တွေပေးတဲ့အတွက်တော့ ကောင်းပေမယ့် လွယ်လွယ်လေးနဲ့လည်း လိမ်လည်မှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့ နေရာပဲလို့ Mason က Insider ကို ပြောပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။
သူက စစချင်းမှာ စပိန်နိုင်ငံ ရောက်နေတယ်လို့ ထင်အောင် ဓာတ်ပုံတစ်ပုံတင်လိုက်တယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ ပြင်သစ်မှာဆိုပြီး နောက် ပုံတု နှစ်ပုံထပ်တင်တယ်။ တမင်သက်သက် လွဲအောင်တောင် ဖန်တီးထားတာကို တွေ့ရမှာပါ..။ ဒါမှလည်း လူတွေကို ကောင်းကောင်းလှည့်စားနိုင်မှာလေ။
ပြင်သစ်က ဓာတ်ပုံတွေကို ယုံတဲ့သူ တော်တော်များလည်းတွေ့ခဲ့ရသလို follower တွေ လျော့သွားတာကိုလည်း သူက သတိထားမိခဲ့တယ်။ လျော့သွားပေမယ့်လည်း အမ်စတာဒမ်မှာဆိုပြီး နောက်တစ်ပုံကို ထပ်တင်တယ်။
Country3Netherlands- Amsterdam 🇳🇱 Had to post this since I haven’t posted on here since last year 😂 Yes I’matourist, and Yes that wasabasic caption uploading3times in5days its hard to be original 😂😂
A post shared by GeorgeMasonTV (@george.masontv) on Jan 2, 2019 at 10:23am PST
နောက်ရက်မှာတော့ အီတလီနိုင်ငံ ရောမမြို့ကို ရောက်နေတယ်ဆိုပြီတင်တယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတေ့ာ ဓာတ်ပုံဟာ ပြင်ထားတယ်ဆိုပြီး စွပ်စွဲသူတစ်ချို့ပါရှိလာတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။
Country4Italy – Rome 🇮🇹 second last country of the trip had some great pizza and pasta here 🍝😂 vlog of the trip will be up Sunday you’re not ready!!
A post shared by GeorgeMasonTV (@george.masontv) on Jan 4, 2019 at 11:18am PST
နောက်ဆုံး ဂရိနိုင်ငံမှာဆိုပြီး တင်မလို့ လုပ်တဲ့ပုံက အတုကြီးမှန်း သိပ်သိသာနေလို့ instagram story မှာသာ တင်ခဲ့ပါတယ်။
We really out here in Mykonos 🇬🇷 NEW VIDEO JUST WENT UP YOU NEED TO CHECK IT OUT 😜
A post shared by GeorgeMasonTV (@george.masontv) on Jan 13, 2019 at 11:28am PST
ဒီလို prank ကို လုပ်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ လူတွေအနေနဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာမှ မြင်သမျှ တောက်ပတဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံတွေကို ဇွတ်အားမကျဖို့နဲ့ လုပ်ကြံဖန်တီးမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တာမို့ သတိထားနိုင်ကြစေဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ prank ကလည်း တကယ်ကို အောင်မြင်သွားခဲ့ပါတယ်ဆိုတဲံအကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဆိုရှယမြီဒီယာပေါမြှာ အငစြတာဂရမြ နောကပြှောငကြွီစယမြှုတှကေ ထရနြးတစခြုအနနေဲ့ ပေါပြှူလာဖှစလြာနပေါတယြ။ အသကြ ၂၁ နှစအြရှယြ George Mason ဆိုတဲ့ YouTuber ဟာဆိုလညြး ဒီနှစအြစောပိုငြးမှာ ထရနြးပေါလြိုကပြှီး prank တစခြုကို ဖနတြီးခဲ့ပါတယြ။
လနဒြနအြခှစေိုကြ ဘလောဂြ့ဂါဟာ သူရဲ့ ဖိုတိုရှော့ပြ စကေးတှကေို ကောငြးကောငြးအသုံးခပွှီး သူ့ အငစြတာဂရမြ အကောငြ့ထဲက follower တှကေို ဥရောပနိုငငြံ ၅ နိုငငြံဆီ ၈ ရကတြာ အလညအြပတြ ခရီးထှကနြတယေလြို့ ထငမြှငစြခေဲ့ပါတယြ။
သူရဲ့နောကပြှောငမြှုကို YouTube ဗီဒီယိုနဲ့ ပှနလြညြ ထုတဖြောခြဲ့ပါတယြ။ ဗီဒီယိုက ပှီးခဲ့တဲ့ ဇနနြဝါရီလက တငခြဲ့ပှီး အဲ့ဒီအခွိနကြစလို့ အခုထိ ကှညြ့ရှုသူ ၇ သနြးကွောရြှိနပေါတယြ။ ဆိုရှယမြီဒီယာဟာ လူပေါငြးမွားစှာနဲ့ ဆကသြှယနြိုငခြှငြ့တှပေေးတဲ့အတှကတြော့ ကောငြးပမယြေ့ လှယလြှယလြေးနဲ့လညြး လိမလြညမြှုတှေ ဖှစပြေါနြိုငတြဲ့ နရောပဲလို့ Mason က Insider ကို ပှောပှထားတာတှရေ့ပါတယြ။
သူက စစခငြွးမှာ စပိနနြိုငငြံ ရောကနြတယေလြို့ ထငအြောငြ ဓာတပြုံတစပြုံတငလြိုကတြယြ။ အဲ့ဒီနောကမြှာတော့ ပှငသြစမြှာဆိုပှီး နောကြ ပုံတု နှစပြုံထပတြငတြယြ။ တမငသြကသြကြ လှဲအောငတြောငြ ဖနတြီးထားတာကို တှရေ့မှာပါ..။ ဒါမှလညြး လူတှကေို ကောငြးကောငြးလှညြ့စားနိုငမြှာလေ။
ပှငသြစကြ ဓာတပြုံတှကေို ယုံတဲ့သူ တောတြောမြွားလညြးတှခေဲ့ရသလို follower တှေ လွော့သှားတာကိုလညြး သူက သတိထားမိခဲ့တယြ။ လွော့သှားပမယြေ့လညြး အမစြတာဒမမြှာဆိုပှီး နောကတြစပြုံကို ထပတြငတြယြ။
နောကရြကမြှာတော့ အီတလီနိုငငြံ ရောမမှို့ကို ရောကနြတယေဆြိုပှီတငတြယြ။ ဒီတစကြှိမမြှာတေ့ာ ဓာတပြုံဟာ ပှငထြားတယဆြိုပှီး စှပစြှဲသူတစခြွို့ပါရှိလာတာကို တှလေို့ကရြတယြ။
နောကဆြုံး ဂရိနိုငငြံမှာဆိုပှီး တငမြလို့ လုပတြဲ့ပုံက အတုကှီးမှနြး သိပသြိသာနလေို့ instagram story မှာသာ တငခြဲ့ပါတယြ။
ဒီလို prank ကို လုပတြဲ့ ရညရြှယခြကွကြတော့ လူတှအနေနေဲ့ ဆိုရှယမြီဒီယာမှ မှငသြမွှ တောကပြတဲ့ နထေိုငမြှုပုံစံတှကေို ဇှတအြားမကဖွို့နဲ့ လုပကြှံဖနတြီးမှုတှေ ဖှစနြိုငတြာမို့ သတိထားနိုငကြှစဖေို့အတှကြ ရညရြှယခြဲ့တာဖှစပြါတယြ။ သူ့ရဲ့ prank ကလညြး တကယကြို အောငမြှငသြှားခဲ့ပါတယဆြိုတဲံအကှောငြး ဖောပြှပေးလိုကရြပါတယြ။
Hong Kong Film Awards ရဲ့ အကောင်းဆုံးပွဲတက်ဖက်ရှင်များကို ဖော်ပြပေးပါလိုက်ပါတယ်….